Myanmar Artist | Myanmar Mp3 Album | Page 170
အချစ် နဲ. အမှား
ချမ်းလေး.. ရဲ.သီချင်းသစ် တစ် ပုဒ်ပါ… နားထောင် ပြီးရင် comment လေးတွေ နဲ. ဝေ ဖန် အားပေးကြပါ ခင် ဗျာ. Download aimini Mediafire
November 11, 2009 Trojan ၀ါသနာရှင် အခွေများ Myanmar Artist Unreleased Albums chanlay3Comments
April 12th Party
April 12th Party ( Chilli Family, Thar Gyi, PlatForm, C7, Freddy, MHL, MPR, NyiNyi, YAK vs CNO ) Album အသစ်လေးပါ။ Download Mediafire iFile CREDIT : Myanmar Songs.net မှပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
November 10, 2009 the sun အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) သားကြီး Chilli Family Myanmar Artist New Myanmar Albums 12 Comments
01.Christmas+1 (သားကြီး) 02.Beware (G-Tone Feat:Bigg-Y & PyiThar) 03.Welcome to tha Ghetto (ချမ်းအေးဝင်း & ချမ်းမြေ့ဦး) 04.ဒီလိုလေး (ChilliFamily) 05.I Lov Ur Gal (သိန်းလင်းစိုး Feat:ကျော်ထွဋ်ဆွေ) 06.အထင်မကြီးဘူး (New Version) (MC.Freddy) 07.မင်းတစ်ယောက်ထဲ (MHL) 08.မိုင်အဝေး (ကျော်ထွဋ်ဆွေ & လွမ်းပိုင်) 09.အသုံးမ၀င်တဲ့ငါ (ရဲရင့်အောင် feat:ဇေရဲ) 10.Run mo` Fucker (လန်ဘား feat:သားကြီး) 11.foever missing You (Q ကြီး (P-Crew)) 12.NOT IMITATE (PrinceY feat:Freddy & ဇေရဲ) 13.အလွတ်သာကဲ (MiSandi & … Continue Reading →
November 10, 2009 chineseboy အခွေ (အများ) Unreleased Albums Leaveacomment
MC ဇေရဲ နဲ့ အာဖြိုး တို့ရဲ့ Mix Tape ပါ For My GF We Must DO Go to IQ Jooks Love In MLS I Never Forget U အစစ်တွေရှိပါရဲ့ DOWNLOAD LINK SHAREBEE LINK
November 8, 2009 chineseboy အခွေ (အများ) Unreleased Albums Leaveacomment
ပြန်မလာနဲ့ by သရဲ
သုဝဏစကိတ်ကွင်းကပါ . . . သီချင်းအကြမ်းလေးကိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အပျော်ရိုက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် . . . http://www.mediafire.com/?hdyzjmjimld
November 8, 2009 porpor ၀ါသနာရှင် အခွေများ4Comments
R-phyo & Zay Ye` – အစစ်တွေရှိပါရဲ့
အသစ်တွေရဲ့ သီချင်းတွေကို နားထောင်ပေးကြပါဦးဗျာ… သူတို့လည်းတော်တော်လေး ကြိုးစားထားကြပါတယ်..
November 6, 2009 koyazar ၀ါသနာရှင် အခွေများ Unreleased Albums 1 Comment
စိုင်းလိက် – စိုင်းလိက်
၀၁။ ပုံစံမတူတဲ့အချစ် ၀၂။ ပြည့်စုံခြင်း ၀၃။ ကြိုတင်သာသိခွင့်ရှိရင် ၀၄။ သက်ဆုံးတိုင် ၀၅။ တစ်ချိန်မှာ ၀၆။ ဖြည့်ဆည်းပေးသူ ၀၇။ ငါချစ်တာတွေကိုမင်းသိဖို့ကောင်းတယ် ၀၈။ နောက်ဘ၀တိုင်အောင်ထိ
November 5, 2009 koyazar အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုင်းလိက် New Myanmar Albums စိုင်းလိက် 19 Comments
ဖြူဖြူကျော်သိန်း – အချစ်များလက်ဆောင်
ဖြူဖြူကျော်သိန်း ရဲ့ အချစ်များလက်ဆောင် သီချင်းလေးပါ။ Download Mediafire iFile
November 4, 2009 the sun အဆိုတော် (မ) ဖြူဖြူကျော်သိန်း Myanmar Artist4Comments
November 4, 2009 [email protected] Rဇာနည်4Comments
နိမိတ်ကောင်းနဲ့လူ (ဂျေမီ၊ ရသ၊ ယုန်လေး၊ D ယံ၊ ဂျောက်ဂျက်၊ လံပါး၊ နက်ကျော်၊ ရဲနောင်၊ စန္ဒီမြင့်လွင်၊ Jenny၊ အိမ့်ချစ်၊ သီရိ (cartoon)၊ အိဖြိုးချယ်ရီ၊ နွေးနွေးချစ်ဖွယ်၊ နိုရာ၊ ဇင်၊ သက်မှုးခင်၊ Happy Boy၊ Pauk C) Featuring : ကြက်ဖ၊ Bigg-Y၊ G Tone ၁။ အကောင်းဆုံး ၂။ ငါမင်းအတွက် ၃။ စဉ်းစား ၄။ လုံးဝမမေ့သေးဘူး ၅။ မြန်မြန်ဟေ့ ၆။ အရိပ်တစ်ခုလိုပဲ ၇။ ဟေ့ကောင်မလေး ၈။ အကျင့်ဆိုး ၉။ ၀န်ခံပါတယ် ၁၀။ နိမိတ်ကောင်း ၁၁။ ငါတကယ်မသိခဲ့တာပဲ ၁၂။ စိတ်ထဲရှိတာအားလုံး ၁၃။ … Continue Reading →
November 3, 2009 the sun အိမ့်ချစ် အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) စန္ဒီမြင့်လွင် ရသ ဂျောက်ဂျက် ယုန်လေး ကြက်ဖ BiGG-Y Dယံ G Tone J-Me Jenny Myanmar Artist New Myanmar Albums 18 Comments
မိုင်းသျှန်ခမ်း -မင်းနဲ့ဝေးချိန် (လုံချင်းခွေသစ်)
Type : Pop&Rock love song Band: Magician music Composer by : Min shan kham & min yaee thit ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းတွေပါ ကြယ်စင်လေး နဲ့ အလွမ်းများရက်ကတော့ မိုက်တယ်ဗျာ…..နားထောင်လိုက်တိုင်း ငယ်ငယ်ကကျောင်းသားဘဝလေးကိုလွမ်း ရင်း ဆက်..ဆက် နားထောင်ဖြစ်တယ်
November 3, 2009 minkoko110 အဆိုတော် (ကျား) မိုင်းသျှန်ခမ်း Leaveacomment